Akụkọ Orsay dị Ka Ọdụ ụgbọ oloko Haydarpaşa | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeỤWAEurope33 FranceAkụkọ nke Orsay dị ka Ọdụ ụgbọ oloko Haydarpaşa
09 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 33 France, Europe, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ 0
akụkọ orsayin dị ka haydarpasa garina
Akụkọ Orsay yiri Haydarpaşa Train Station: 1939 bụ ụlọ na-abaghị uru nke tụfuru agwa ọdụ ya n'ihi na ọ dịghị mma maka ụgbọ oloko ogologo. Na 1970, ha na-eche imebi ulo ma wuo otite kama. Mgbe ndị Parisi jụrụ, gọọmentị kpebiri ime ka ụlọ ahụ bụrụ ebe ngosi nka na 1977. Mepee na 1986, Orsay Museum 32 anabatala ihe karịrị otu nde ndị ọbịa 93 kwa afọ.
Akwụkwọ akụkọsite na Melishan Devrim; Musée d'Orsay bụ otu n'ime adreesị a na-eleta na Paris, ọ bụghị naanị n'ihe gbasara nchịkọta ya, kamakwa n'ihi na ọ bụ ọrụ nkà. Mgbe Orsay Obí (Palais d'Orsay), nke ewuru n'oge Napoleon, gbara ọkụ n'oge 1810 Paris Commune, nnukwu ụlọ ọrụ wuru na saịtị nke obí eze. Mmeghe nke ọdụ ụgbọ ahụ kwekọrọ na mmeghe nke 1871 Paris Exhibition, na ebe nnabata ndị ọbịa bịarutere si mba ọzọ bụ Ọdụ Ogwu Paris. Stationlọ ụlọ ogologo ogologo nke 1900 bụ ụlọ ọrụ 'ụlọ ọrụ' kacha nke oge ahụ n'ihe banyere narị puku 175 puku, mana e zoro ya na mgbidi ụlọ n'azụ ụlọ ọyịsị mara mma iji dọọ Louvre. Buildinglọ ọdụ ahụ, nke na-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 12 n'ime afọ ahụ, efunahụla ọrụ ya n'ihi ntinye nke ụgbọ oloko dị ogologo na 40.
Ndị France nwere ezigbo mmasị n'ihe ha nwere ike ime na omenaala ha na nka ha nwere mgbe agha 2.World gasịrị. Maka oge izizi n'okpuru ọchịchị Charles de Gaulle, e guzobere Ministry of Culture. André Malraux, onye mbu a họpụtara ije ozi a, bụ onye akụkọ ihe mere eme, ọkacha mmasị na ngalaba mmụta akparamaagwa. Agbanyeghị enweghị mmepe pụtara ìhè n'oge Malraux, onye jere ozi dị ka onye ozi obodo mbụ n'etiti ọdịnala n'etiti 1959-1969, ndị Parisi na-agbasi ike mgbe niile na ichebe obodo ha.
Ọdụ Orsay, nke a na-ejibeghị kemgbe 1939, nọ na-eche ihu kpọmkwem na Louvre, n'etiti obodo. Ọchịchị ọhụrụ ahụ nwere nsogbu, na-ewute ya na ụlọ nke dị n'etiti obodo abụrụla nke na-agwụ ike, ekwela ka mbibi nke ụlọ ọdụ ahụ na 1970 were were ụlọ nkwari akụ ndị nwere ọgbara ọhụrụ dochie ya. Jacques Duhamel, onye minista ọdịbendị mgbe Malraux, onye duru mkpebi a, dubere ụkpụrụ ọdịnala nke gọọmentị na etiti. Ọ nakweere iwu nke gbanwere ọdịbendị agbụrụ na ọdịbendị mba niile. Duhamel, onye nwere ihe ịga nke ọma inyefe ego a na-ekenye ndị na-achị mpaghara mpaghara ya na ozi ya, tụfuru oche ya na 1973 na enwere mgbanwe na usoro ọdịbendị ọdịnala nke France, si otú ahụ na-ezere ọdịda nke ụgbọ oloko Orsay.
AKW .KWỌ UKWU EGO
Na 1977, a kpebiri ikpegharị ụlọ ọdụ ka ọ bụrụ ebe ngosi nka. Na 1975, Museumlọ Ọrụ Ihe Nlebaanya nke France mere atụmatụ a ma chọọ ime ka mpaghara a bụrụ ebe ngosi nka, n'etiti Louvre na National Museum of Modern Art na Georges Pompidou Center. E nyere 1978 ọrụ ndị nkịtị ka ọ na-ahụ maka ntụgharị nke ụlọ ahụ, nke enyere ọkwa nke akụkọ ihe mere eme, ebe a na-edebe ihe ngosi nka, François Mitterrand, onye isi oche oge ahụ.
EGO NA AGBALAKA ASALAMPU EGO
Mgbanwe a na ebumnuche ọdịnala France nyere aka nke ukwuu na akụ na ụba mba. Na 1990, ekwuputara ihe ngosi Louvre na Versailles Palace 'obodo nwere onwe ha, a na-ahapụ ụlọ ngosi ihe nka ka ha mepụta ego ha ma jiri ego aka ha. Na 2000s, enyere ndị ọrụ nzuzo dị iche iche ego dị ka mbelata ego ụtụ isi ka ha nye ego maka ụlọ ebe ihe ngosi nka. N'oge ije ozi nke onye na-akọ akụkọ ihe mere eme Malraux, ụlọ ọrụ ọdịbendị, nke nyere naanị 0.39 na akụ na ụba mba ahụ ruru olu nke 1981 ijeri france na 2,6 na 1993 ijeri francs na 13,8. Taa, ego nke ọdịbendị ọdịnala French 7,3 ijeri.
MUSM MUSAKA EGO NA-EGO NA-AKAGBANWE GAR
N’oge ntụgharị nke ọdụ ụgbọ okporo aka Orsay n’ime ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie, a na-ahapụkarị ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ banyere ụkpụrụ ụlọ ahụ dị ka aha ha. Ulo elu nke enyo enyo, nnukwu ụlọ nzukọ nwere akwa dị elu, ebe a na-eche nche n’ime ọdụ ahụ na windo nwere klọọkụ gbanwere n’ime ụlọ ebe a na-enweghị ihe ọ bụla site na usoro ụlọ narị afọ 19. N'iburu n'uche na ụlọ ahụ bụ narị afọ 19, a kpọfere ebe ngosi ihe mgbe ochie gaa na ụlọ ebe a na-anọ akụkọ ihe mere eme mgbe 1848 na tupu 1914, ebe ọtụtụ eserese na ihe osise dị ka 2000, na Orsay Museum ghọrọ ebe ngosi ihe mgbe ochie. A na-ahụ ihe akpụrụ akpụ nke 600.yüzy thel n'ụlọ ezumezu nke ọdụ ahụ, a na-egosipụtakwa arịa ụlọ na foto nke oge ahụ na ebe ngosi nka. Ọrụ ndị a ma ama na-adọrọ mmasị dị n’elu ala. Nnukwu ihe ncheta ndị ahụ na windo nke Orsay Museum bụ mpaghara kachasị amasị ndị njem nleta iji see foto.
Rslọ ihe ngosi nka Orsay, nke mezuru nnabata nke afọ abụọ nke 2011, na-efu nde $ 27, na-akwado ndị ọbịa karịa 3 nde kwa afọ. N'ime mweghachi ọhụrụ, etinyere usoro ahụ site na eserese mgbidi na agba pastel kwekọrọ na eserese na igosipụta agba dị na eserese ndị ahụ. Ihe karịrị otu nde mmadụ gara na ebe ngosi nka ebe mmalite ya na 1986. Thelọ ebe a na-edebe ihe ngosi nka, nke gụnyere ọrụ ndị nna ama ama ama ama ama ama nke French dịka Edouard Manet, Gustave Courbet, Vincent Van Gogh, Renoir na Rodin na-akwadokwa ihe ngosi nwa oge iji gbasaa nchịkọta ya. N'ime ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie enwere ụlọ ebe a na-edebe ihe nkiri na sinima.
Dịka ụlọ ọrụ steeti nwere onwe anyị, ka anyị kwuo ụlọ ọrụ ụgbọ oloko Haydarpaşa na usoro nke ịhapụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na njikwa ndị ọkachamara ma weta ụlọ narị afọ 19 na mba ahụ na ọrụ ọhụrụ.
Haydarpaşa Railway Station, Akụkọ Nkọwapụta na Haydar…
Akụkọ nke ụgbọ ala furu efu na-eburu ngwá agha na Anatolia…
Akụkọ nke Rails Rụgharịrị Abdülhamid Han
Rslọ ihe nkiri nke Orsay